China Solar Panel mpanamboatra sy mpamatsy | Xinneng
Nandritra ny 10 taona mahery dia namokatra panneaux solaire namboarina sy namboarina lafo izahay izay amidy eran'izao tontolo izao.
Ny takelaka ataontsika dia vita amin'ny vera marokoroko miaraka amin'ny hazavana avo lenta, EVA, sela masoandro, lamosina, firaka aliminioma, Box Box, Silica gel.
Manome toky ny tontonana mandritra ny 25 taona izahay.
Ny vokatra dia aondrana any Eropa, Moyen Orient, Afrika, Amerika atsimo ary firenena hafa any Azia.
Ny sela Solar, fantatra amin'ny anarana hoe "chip de solar" na "photocells", dia takelaka semiconductor photoelectric izay mampiasa tara-pahazavana hamokarana herinaratra mivantana. Ny sela mandeha irery dia tsy azo ampiasaina mivantana ho loharanon-kery. Amin'ny maha loharanom-pahefana azy dia misy sela solika tokana maromaro tsy maintsy ampifandraisina amin'ny andiany, ampifandraisina amin'ny fifandanjana ary voahidy mafy ho singa.
Ny firafitry ny tontolon'ny masoandro sy ny asany
(1) Glass vera: Ny asany dia ny miaro ny vatan'ny famokarana herinaratra (toy ny sela), ary ilaina ny fisafidianana ny fampitana hazavana: Ny fifindran'ny hazavana dia tokony ho avo (amin'ny ankapobeny mihoatra ny 91%); fitsaboana fotsy fotsy be.
(2) EVA: Ampiasaina hampifamatotra sy hametahana ny vera voafehy sy ny vatan'ny famokarana herinaratra (sela).
(3) sela: ny famokarana herinaratra no tena asany.
(4) Backplane: Function, famehezana, insulate ary tantera-drano.
(5) firaka aliminioma: miaro ny laminate, mitana andraikitra manokana amin'ny famehezana sy fanohanana.
(6) Junction boaty: arovy ny rafitra famokarana herinaratra iray manontolo ary miasa ho toy ny toby famindrana ankehitriny.
(7) Silica gel: vokan'ny famehezana
Ny tontolon'ny masoandro dia mizara ho tontolon'ny silikonin'ny monocrystalline sy ny tontolon'ny masoandro silika polycrystalline. Ny fahombiazan'ny fiovan'ny photoelectric an'ny tontolon'ny silikonin'ny monocrystalline dia avo kokoa noho ny valin'ny masoandro polycrystalline silicon. Ny voltita sy ny wattage an'ny tontonana amin'ny masoandro dia azo alaina, matetika avy amin'ny 5watt ka hatramin'ny 300watt. Ny vidin'ny panneaux solaires dia isaina isaky ny watt.
Karazana takelaka azo avy amin'ny masoandro
Ny fahombiazan'ny fiovan'ny photoelectric an'ny tontolon'ny silikonin'ny monocrystalline dia manodidina ny 15%, ary ny avo indrindra dia 24%. Io no fahombiazan'ny fiovam-po elektrika avo lenta amin'ny karazan-java-masoandro rehetra, saingy goavana be ny vidin'ny famokarana ka tsy afaka ampiasaina be sy be mpampiasa. Mampiasa. Koa satria ny silicon monocrystalline dia mazàna nohaingoina fitaratra henjana sy resina tsy tantera-drano, dia mateza izy io ary manana fiainana fanompoana hatramin'ny 15 taona, ary hatramin'ny 25 taona.
Panamasoandro silikika polycrystalline
Ny fizotry ny tontolon'ny masoandro silika polycrystalline dia mitovy amin'ny valin'ny masoandro silikona monocrystalline, fa ny fahombiazan'ny fiovan'ny photoelectric an'ny tontonana silika polycrystalline dia tokony hahena be, ary ny fahombiazan'ny fiovan'ny fotodrafitr'asa dia manodidina ny 12% (tamin'ny 1 Jolay 2004 , Ny fahombiazan'i Japan Sharp dia 14,8%. Tontonana avo indrindra amin'ny tontolon'ny polysilicon solar). Raha ny vidin'ny famokarana dia mora kokoa noho ny tontolon'ny silikonan'ny monocrystalline, tsotra ny fanamboarana, mamonjy herinaratra ary ambany ny vidin'ny famokarana, noho izany dia novolavolaina tamina vola be. Ankoatr'izay, ny androm-piainan'ny tontolon'ny silika polycrystalline dia fohy kokoa noho ny an'ny tontolon'ny masoandro silika monocrystalline. Raha ny fahombiazan'ny vidiny, somary tsara kokoa ny tontolon'ny silikonan'ny monocrystalline.
Cellule manontolo ao amin'ny Poly 60
Hery lehibe indrindra ao amin'ny STC (Pmax)
TOSIKARATRA miasa tsara indrindra (Vmp)
Operating optimum ankehitriny (Imp)
Temperature amin'ny Module miasa
-40 ° C hatramin'ny +85 ° C
TOSIKARATRA avo indrindra
Naoty Fuse Series farany ambony
Fitsapana mahazatra (STC)
lrradiance 1000 W / m 2, mari-pana mody 25 ° C, AM = 1.5; Ny fandeferana Pmax, Voc ary Isc dia ao anatin'ny +/- 5% rehetra.
Mono 60 sela manontolo
Standard Test Condition (STC) lrradiance 1000 W / m 2, mari-pana maodely 25 ° C, AM = 1.5; Ny fandeferan'ny Pmax, Voc ary Isc dia ao anatin'ny +/- 5% rehetra.
Sary bebe kokoa
Sary famokarana orinasa
Teo aloha: Generator karazana mangina
Manaraka: Trailer Type Generator
Panelan'ny masoandro 100w
GGD AC Kabinetra fanaparitahana herinaratra ambany